သငျ့ခဈြသူက သငျ့အပျေါ တကယျခဈြမခဈြ ခှဲခွားသိနိုငျမယျ့ အခကျြ(၈)ခကျြ - ONE DAILY MEDIA
Relationship တဈခုမှာ သငျ့ဘကျက လေးလေးနကျနကျနဲ့ “ခဈြတယျ” လို့ ပွော‌လရှေိ့သျောလညျး တဈဖကျက ဝတျကွတေနျး‌ကွေ “ကြေးဇူးပဲ ” ဟုလောကျသာ တုံ့ပွနျခံရလရှေိ့ပါသလား ? ဒါကသငျ့ကို အတျောလေးစိတျမသကျမသာဖွဈစမှောပါ ။ မြှျောလငျ့ထားခဲ့သလောကျ ပှငျ့လငျးတဲ့တုံ့ပွနျမှုတှမေရရှိခွငျးအတှကျ အံ့သွမိနိုငျပါတယျ ။ သငျ့အပျေါ ခံစားခကျြတှကေို ထုတျမပွတဲ့ သငျ့လကျတှဲဖျောရဲ့အပွုအမူတှဟော သခြောပေါကျသငျ့အတှကျ သံသယအတှေးတှေ ဝငျစမှောပါ။
သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကိုတကယျမခဈြပဲ ဟနျဆောငျနတောသာဖွဈကွောငျး သိရှိနိုငျမယျ့ အရေးကွီးအခကျြ(၈)ခကျြကို သတိပွုဖှယျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။
(၁) လကျတှမှေ့ာထကျ ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါနဲ့လူအမြားရှတှေ့ငျသာ အကဲပိုခဈြပွခွငျး
Instagram ကဲ့သို့သော လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ စုံတှဲပုံပေါငျးမြားစှာဖွငျ့ တငျ၍ဖွဈစေ ၊ လူအမြားရှမှေ့ာသာဖွဈစေ အဖွဈသညျးခဈြပွတတျသူမြိုးဆိုလြှငျ သတိပွုသငျ့ပါတယျ။ လူအထငျကွီးခံရစရေနျ ဟနျဆောငျခဈြခွငျးမြိုးသာ ဖွဈပွီး လကျတှဘေ့ဝ နှဈကိုယျကွားမှာတော့ အေးစကျသော ဆကျဆံရေးတဈခု ဖွဈနနေိုငျပါတယျ။ ၎င်းငျးတို့ဟာ Relationship တဈခုရဲ့ အောငျမွငျမှု၊ပြျောရှငျမှုတို့ကို လူအမြားရဲ့အားကခြံရမှု ၊ လူမှုကှနျရကျပျေါမှ အပွုသဘောဆောငျသော မှတျခကျြပေးမှု တို့ဖွငျ့တိုငျးတာလရှေိ့သူမြား ဖွဈပါတယျ။
(၂) Sahara သဲကန်တာရထကျပငျပိုမိုခွောကျသှနေ့သေော စကားဝိုငျးမြား
ပွီးပွညျ့စုံသော Realtionship တဈခုအတှကျ နှဈဦးနှဈဖကျစလုံးရဲ့ ပှငျ့လငျးစှာပွောဆိုဆကျဆံတတျမှု ၊ အလာပသလာပ ပွောဆိုတတျမြားလညျး လိုအပျပါတယျ။ သငျ့ထံမှ တဈခုခုလိုအပျတာရှိမှ လာရောကျစကားပွောဆိုတတျသူမြိုး ၊ သငျပွောတဲ့အကွောငျးအရာကို စိတျဝငျတစားနားမထောငျပေးတတျသူမြိုး မဟုတျရငျ သငျ့အနနေဲ့သတိပွုစဥျးစားသငျ့ပါပွီ။
(၃) သငျ့အကငျြ့စရိုကျမြားကို ပွောငျးလဲပဈရနျကွိုးစားခွငျး
တဈဦးအပျေါတဈဦး သဘောမကသြောစရိုကျအခြို့လဲ ကိုယျစီ ကိုယျစီရှိတတျပါတယျ ။သို့သျော ညှိနှိုငျးခွငျးမြိုးမရှိ သငျ့အကငျြ့စရိုကျမြားကိုသာ ပွောငျးလဲပဈရနျ တဈဖကျသတျတောငျးဆိုစိတျဒုက်ခပေးနတေတျသူမြိုးကို ရှောငျသငျ့ပါမယျ။
(၄) ပွသာနာမြားကို အတူတကှအဖွမေရှာပဲ ရှောငျပွေးတတျခွငျး
သဘောထားကှဲလှဲမှုနှငျ့ ငွငျးခံမှုမြားဟာ လူနှဈဦးကွားမှာ သဘာဝအတိုငျးရှိစမွဲသာဖွဈပါတယျ။ ပွသာနာတဈခုအတှကျ အစှနျးမရောကျပဲ ဖွရှေငျးတတျရနျမှာ နှဈဦးစလုံး၏ တာဝနျဖွဈပါတယျ။ ဤသို့မဟုတျ ဖွရှေငျးရနျကွိုးစားခွငျးမရှိဘဲ သငျ့စကားမြားကိုလညျးနားမထောငျ ရှောငျဖယျတတျသူမြိုးဟာ သငျ့အပျေါအမှနျတကယျခဈြမွတျနိုးသူ မဖွဈလာနိုငျပါဘူး။
ထို့အပွငျ ထိုသူမြိုးဟာ သငျ့နာကငျြခံစားရမှု သငျ့စိုးရိမျပူပနျမှုတှကေိုလဲ ဂရုစိုကျလရှေိ့သူမြား မဟုတျကွပါဘူး
သငျနဲ့ခြိနျးဆိုထားပွီးလြှငျ တခွားအရေးမပါသောဆငျခွမြေားဖွငျ့ ဖကျြလရှေိ့သလို သာမနျကိစ်စတဈခုသဖှယျ ဝမျးနညျး‌မှုတဈစုံတဈရာလဲ ပွလမေ့ရှိပါဘူး ။ မတတျသာသညျ့ အဆုံးတှငျပငျ ကမျးခွတေဈခုခု (သို) တောငျတကျခွငျး အစရှိတဲ့ စိတျအပနျးဖွစေရာ ခရီးတဈခုပွနျလညျစီစဉျပေးခွငျးမြိုးဖွငျ့ သငျ့အပျေါအလေးထားမှုကို ပွသပေးရနျလိုအပျပါတယျ။
ရညျစားဟောငျးအကွောငျးသာ မကွာခဏပွောဆိုခွငျး (သို့) သငျနဲ့ နှိုငျးယှဉျပွောဆိုခွငျးမြားရှိနလြှေငျ သူဟာအတိတျတှထေဲမှာ ပိတျမိနပွေီး သငျ့အပျေါစိတျကစားခွငျးမြိုးဖွဈနိုငျကွောငျးကိုဂရုပွုပါ။ ထို့အပွငျ သငျ့အပျေါ အနနေီးလို့ ရှေးခယျြခွငျးမြိုး ၊ သငျကခဈြပေးသဖွငျ့သာ ရှေးခယျြလိုကျခွငျးမြိုး နှငျ့ ၎င်းငျးတို့ရဲ့စိတျနှငျ့နှလုံးသားဟာ မညျသညျ့နရောတှငျရှိနမေညျတို့ကို ဂရုပွုလလေ့ာရပါမယျ။
လေးနကျသော အခဈြတဈခုမှာ အနာဂတျအစီအစဉျမြား ပါဝငျရပါတယျ။ အိမျ‌ထောငျပွုခွငျး ၊ သားသမီးယူခွငျးမြားတငျမကပဲ နှဈဖကျမိဘမြားနှငျ့တှဆေုံ့မိတျဆကျခွငျး ၊ အနာဂတျစီးပှားရေးအတှကျ တိုငျပငျခွငျးမြားရှိရပါမယျ။ထိုသို့မဟုတျပဲ အထကျပါအကွောငျးအရာမြားကို စိတျဝငျစားခွငျးပငျမရှိနလြှေငျ သငျ့အပျေါရရှေညျရညျရှယျမထားသောသဘောသကျရောကျနပေါလိမျ့မယျ။
ယနခေ့တျေ လူအမြားစုဟာ Social media မြားတှငျသာမက နစေ့ဉျလူမှုဘဝမြားတှငျပါကွှားဝါတတျကွပါတယျ။ ဈေးကွီးအဝတျအစားမြား ၊ အထကျတနျးစား ဘားနှငျ့စားသောကျဆိုငျမြား ၊ ခမျးနားထညျဝါသော နရောမြား အပျေါတှငျသာ စိတျအားထကျသနျပွီး ခွိုးခွံခြှတောတတျသူ သငျ့အပျေါရနျရှာခွငျးမြိုးမြားပငျ ကွုံတှလေ့ာရပါက သငျ့အပျေါထားတဲ့ ဟနျဆောငျခဈြခွငျးမြားလဲ မွငျသာလာနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
သငျ့ရဲ့အခုလကျရှိအခဈြရေးမှာရော အခုဖျောပွခဲ့တဲ့ အခကျြမြိုးတှေ ကွုံတှရေ့ခွငျးရှိနလေားဆိုတာ ပွနျလညျဆနျးစဈကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
သင့်ချစ်သူက သင့်အပေါ် တကယ်ချစ်မချစ် ခွဲခြားသိနိုင်မယ့် အချက်(၈)ချက်
Relationship တစ်ခုမှာ သင့်ဘက်က လေးလေးနက်နက်နဲ့ “ချစ်တယ်” လို့ ပြော‌လေ့ရှိသော်လည်း တစ်ဖက်က ဝတ်ကြေတန်း‌ကြေ “ကျေးဇူးပဲ ” ဟုလောက်သာ တုံ့ပြန်ခံရလေ့ရှိပါသလား ? ဒါကသင့်ကို အတော်လေးစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေမှာပါ ။ မျှော်လင့်ထားခဲ့သလောက် ပွင့်လင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမရရှိခြင်းအတွက် အံ့သြမိနိုင်ပါတယ် ။ သင့်အပေါ် ခံစားချက်တွေကို ထုတ်မပြတဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့အပြုအမူတွေဟာ သေချာပေါက်သင့်အတွက် သံသယအတွေးတွေ ဝင်စေမှာပါ။
သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုတကယ်မချစ်ပဲ ဟန်ဆောင်နေတာသာဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်မယ့် အရေးကြီးအချက်(၈)ချက်ကို သတိပြုဖွယ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
(၁) လက်တွေ့မှာထက် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်နဲ့လူအများရှေ့တွင်သာ အကဲပိုချစ်ပြခြင်း
Instagram ကဲ့သို့သော လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ စုံတွဲပုံပေါင်းများစွာဖြင့် တင်၍ဖြစ်စေ ၊ လူအများရှေ့မှာသာဖြစ်စေ အဖြစ်သည်းချစ်ပြတတ်သူမျိုးဆိုလျှင် သတိပြုသင့်ပါတယ်။ လူအထင်ကြီးခံရစေရန် ဟန်ဆောင်ချစ်ခြင်းမျိုးသာ ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ဘဝ နှစ်ကိုယ်ကြားမှာတော့ အေးစက်သော ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ Relationship တစ်ခုရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ပျော်ရွှင်မှုတို့ကို လူအများရဲ့အားကျခံရမှု ၊ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှ အပြုသဘောဆောင်သော မှတ်ချက်ပေးမှု တို့ဖြင့်တိုင်းတာလေ့ရှိသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Sahara သဲကန္တာရထက်ပင်ပိုမိုခြောက်သွေ့နေသော စကားဝိုင်းများ
ပြီးပြည့်စုံသော Realtionship တစ်ခုအတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုဆက်ဆံတတ်မှု ၊ အလာပသလာပ ပြောဆိုတတ်များလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ထံမှ တစ်ခုခုလိုအပ်တာရှိမှ လာရောက်စကားပြောဆိုတတ်သူမျိုး ၊ သင်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်တစားနားမထောင်ပေးတတ်သူမျိုး မဟုတ်ရင် သင့်အနေနဲ့သတိပြုစဉ်းစားသင့်ပါပြီ။
(၃) သင့်အကျင့်စရိုက်များကို ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားခြင်း
တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး သဘောမကျသောစရိုက်အချို့လဲ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီရှိတတ်ပါတယ် ။သို့သော် ညှိနှိုင်းခြင်းမျိုးမရှိ သင့်အကျင့်စရိုက်များကိုသာ ပြောင်းလဲပစ်ရန် တစ်ဖက်သတ်တောင်းဆိုစိတ်ဒုက္ခပေးနေတတ်သူမျိုးကို ရှောင်သင့်ပါမယ်။
(၄) ပြသာနာများကို အတူတကွအဖြေမရှာပဲ ရှောင်ပြေးတတ်ခြင်း
သဘောထားကွဲလွဲမှုနှင့် ငြင်းခံမှုများဟာ လူနှစ်ဦးကြားမှာ သဘာဝအတိုင်းရှိစမြဲသာဖြစ်ပါတယ်။ ပြသာနာတစ်ခုအတွက် အစွန်းမရောက်ပဲ ဖြေရှင်းတတ်ရန်မှာ နှစ်ဦးစလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသို့မဟုတ် ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားခြင်းမရှိဘဲ သင့်စကားများကိုလည်းနားမထောင် ရှောင်ဖယ်တတ်သူမျိုးဟာ သင့်အပေါ်အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသူ မဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး။
ထို့အပြင် ထိုသူမျိုးဟာ သင့်နာကျင်ခံစားရမှု သင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလဲ ဂရုစိုက်လေ့ရှိသူများ မဟုတ်ကြပါဘူး
သင်နဲ့ချိန်းဆိုထားပြီးလျှင် တခြားအရေးမပါသောဆင်ခြေများဖြင့် ဖျက်လေ့ရှိသလို သာမန်ကိစ္စတစ်ခုသဖွယ် ဝမ်းနည်း‌မှုတစ်စုံတစ်ရာလဲ ပြလေ့မရှိပါဘူး ။ မတတ်သာသည့် အဆုံးတွင်ပင် ကမ်းခြေတစ်ခုခု (သို) တောင်တက်ခြင်း အစရှိတဲ့ စိတ်အပန်းဖြေစရာ ခရီးတစ်ခုပြန်လည်စီစဉ်ပေးခြင်းမျိုးဖြင့် သင့်အပေါ်အလေးထားမှုကို ပြသပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ရည်စားဟောင်းအကြောင်းသာ မကြာခဏပြောဆိုခြင်း (သို့) သင်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုခြင်းများရှိနေလျှင် သူဟာအတိတ်တွေထဲမှာ ပိတ်မိနေပြီး သင့်အပေါ်စိတ်ကစားခြင်းမျိုးဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုဂရုပြုပါ။ ထို့အပြင် သင့်အပေါ် အနေနီးလို့ ရွေးချယ်ခြင်းမျိုး ၊ သင်ကချစ်ပေးသဖြင့်သာ ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းမျိုး နှင့် ၎င်းတို့ရဲ့စိတ်နှင့်နှလုံးသားဟာ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေမည်တို့ကို ဂရုပြုလေ့လာရပါမယ်။
လေးနက်သော အချစ်တစ်ခုမှာ အနာဂတ်အစီအစဉ်များ ပါဝင်ရပါတယ်။ အိမ်‌ထောင်ပြုခြင်း ၊ သားသမီးယူခြင်းများတင်မကပဲ နှစ်ဖက်မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ခြင်း ၊ အနာဂတ်စီးပွားရေးအတွက် တိုင်ပင်ခြင်းများရှိရပါမယ်။ထိုသို့မဟုတ်ပဲ အထက်ပါအကြောင်းအရာများကို စိတ်ဝင်စားခြင်းပင်မရှိနေလျှင် သင့်အပေါ်ရေရှည်ရည်ရွယ်မထားသောသဘောသက်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။
ယနေ့ခေတ် လူအများစုဟာ Social media များတွင်သာမက နေ့စဉ်လူမှုဘဝများတွင်ပါကြွားဝါတတ်ကြပါတယ်။ ဈေးကြီးအဝတ်အစားများ ၊ အထက်တန်းစား ဘားနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ ၊ ခမ်းနားထည်ဝါသော နေရာများ အပေါ်တွင်သာ စိတ်အားထက်သန်ပြီး ခြိုးခြံချွေတာတတ်သူ သင့်အပေါ်ရန်ရှာခြင်းမျိုးများပင် ကြုံတွေ့လာရပါက သင့်အပေါ်ထားတဲ့ ဟန်ဆောင်ချစ်ခြင်းများလဲ မြင်သာလာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သင့်ရဲ့အခုလက်ရှိအချစ်ရေးမှာရော အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်မျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရခြင်းရှိနေလားဆိုတာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။